Ruhr University Bochum - Higher Education an-tany hafa any Eoropa
fanafohezan-teny : RUB
Créé : 1962
mpianatra (eo ho eo.) : 43000
Aza adino ny discuss Ruhr University Bochum
Ruhr University Bochum , miorina eo amin'ny faritra atsimo havoana ny faritra afovoan'i Ruhr Bochum, Niorina tamin'ny 1962 tahaka ny voalohany oniversite-panjakana vaovao tany Alemaina nanomboka tamin'ny Ady Lehibe II. Instruction Nanomboka tamin'ny 1965.
Ny Ruhr-University Bochum dia iray amin'ireo anjerimanontolo lehibe indrindra any Alemaina sy ny ampahany amin'ny Deutsche Forschungsgemeinschaft, manan-danja indrindra alemà fikarohana bola fikambanana.
Ny RUB Tena nahomby tao amin'ny Excellence Initiative ny Federaly Alemana sy ny Fanjakana fitondram-panjakana (2007), ny fifaninanana eo Alemaina oniversite malaza indrindra. Izany dia iray amin'ireo andrim-panjakana vitsy sisa nifaninana ho ny anaram-boninahitra iray “sangany oniversite”, nefa tsy nahazo fihodinana farany ny fifaninanana. Misy sivy anjerimanontolo amin'izao fotoana izao any Alemaina izay mitana izany anaram-boninahitra.
Ny University of Bochum dia iray amin'ireo oniversite voalohany tany Alemaina mba hampiditra iraisam-pirenena sy ny mari-pahaizana licence tompony ny diplaoma, izay nisolo ny nentim-paharazana Diplom alemà sy Magister. Afa-tsy ho an'ny toe-javatra manokana vitsivitsy (ohatra in Lalàna) ireo mari ireny aterina araka fahaizanareo rehetra ao amin'ny Ruhr University. amin'izao fotoana izao, ny anjerimanontolo manolotra tanteraka ny 184 samy hafa avy amin'ny fandaharana fianarana akademika saha solontena tao amin'ny oniversite.
Any teo afovoan'ny ny mavitrika, tia mandray vahiny tanàn-dehibe ny Ruhr, ao am-Eoropa, ny Ruhr-Universität Bochum (RUB) sy ny 20 fahaizanareo, RUB ny famaizana ny andrim-vondrona, dia an-trano ny 5,600 mpiasa sy ny 41,000 mpianatra avy 130 firenena. Ny lehibe rehetra fitsipika ara-tsiansa no tafaray ao amin'ny toeram-pianarana iray voalamina tsara.
Ny RUB no ao amin'ny lalana mankany lasa iray amin'ireo oniversite eoropeanina mpitarika ny taonjato faha-21. Saika antokony rehetra ireny aterina araka ny Bachelor sy ny mari-pahaizana Master fandaharana. Ny tsara ny fandaharan'asa efa nanao anarana iraisam-pirenena: RUB Research Sekoly toy ny iraisam-pirenena ho an'ny voarafitra oniversite doctorat dia fikarohana eo amin'ny fiainana siansa, siansa natoraly, injeniera, ny humanities sy ny siansa sosialy; ny sampahom-Excellence RESOLV (Ruhr mandalina Solvation); interfaculty sy interdisciplinary fikarohana Departments, izay mifanohitra izy, nasionaly sy iraisam-pirenena networked, mandranitra ny profil ny RUB. Nampiana izany dia manan-tsahala fandaharana ho amin'ny fampiroboroboana ny vao Asa mpikaroka, ary tena tsara foto-drafitrasa.
Inona no mahatonga izany rehetra ho velona dia ny olona izay mihaona amin'ny toeram-pianarana ny mangetaheta ny fahalalana, ny te hahafanta-javatra, ary ny fanoloran-tena. Manampy mamolavola ny RUB sy ny misokatra-tsaina mahatonga ny RUB toerana tsara tarehy iray ho an'ny olona avy amin'ny manerana izao tontolo izao.
Faculty of Engineering elektrika sy ny Fampahalalam-baovao
Ianao ve mila discuss Ruhr University Bochum ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Photos: Ruhr University Bochum ofisialy Facebook